I-iPhone XR: ezi zezinye iindlela ezilungileyo | I-Androidsis
UNerea Pereira | | Izaziso
Nge-12 kaSeptemba edlulileyo ibilusuku oluhle kwiApple. Inkampani ye-Bitten Apple yazisa i-iPhone Xs, i-iPhone Xs iMax kunye ne-iPhone Xr, iiflegi ezintsha zosapho lwee-smartphones zenkampani yaseMelika. Kwaye kuthathe ngaphezulu kwenyanga ukuba i-iPhone engabizi ifike kwintengiso. Ngaba inkampani ithathe ixesha elide ukuba iphehlelele i-terminal yayo kwintengiso? kunokwenzeka ukuba ewe, ngakumbi ukuba sithathela ingqalelo inani elikhulu lezinye iindlela kwi-iPhone Xr esinokuyifumana kwintengiso.
Gcina ukhumbula ukuba akukho mntu unokuyiphika loo nto i-iPhone Xr ine-hardware enkulu kunye noyilo olugqwesileyo. Yinyani leyo kwaye, njengabalandeli benkqubo yokusebenza kaGoogle, kufuneka sivume ukuba umsebenzi owenziwe yinkampani esekwe eCupertino ubulungile ngenene. Kodwa, nokuba sithanda i-iOS ngaphezulu okanye ngaphantsi, okanye ukungakwazi ukwandisa imemori yayo okanye ukuba yonke into kufuneka ingene ngaphakathi kwenkqubo ye-Apple, kukho okuhle kodwa nge-iPhone Xr: ixabiso layo.
Kwaye i-iPhone Xr entsha ixabisa i-919 euro. Ixabiso eliphezulu kakhulu, ngakumbi xa sicinga ukuba kukho ezinye iindlela kwesi sixhobo ezibonelela ngokusebenza ngokugqwesileyo, ukugqitywa komgangatho okhuphisana ubuso ngobuso nesisombululo sika-Apple kwaye, yintoni embi kwisixhobo esitsha senkampani. American, ezinye iinkcukacha kwicandelo lezixhobo edlula ngokucacileyo i-iPhone Xr.
1 Ezi zezinye zeendlela ezilungileyo kwi-iPhone Xr kwaye zitshiphu!
1.1 Thenga i-Samsung Galaxy S9 ngexabiso lehlazo
1.2 Ngaba ufuna i-phablet njengenye indlela eya kwi-iPhone Xr? i-Galaxy Note 9 iya kuba ngumlingane wakho osenyongweni
1.3 Eyona fowuni yekhamera kwintengiso ngexabiso elinomtsalane
1.4 IHuawei P20 Pro, enye indlela eya kwi-iPhone Xr kunye necandelo elimangalisayo lokufota
Ezi zezinye zeendlela ezilungileyo kwi-iPhone Xr kwaye zitshiphu!
Ngale ndlela, asithethi ngeefowuni ezibonelela ngesixhobo esibi okanye izinto ezingafunekiyo. Zonke iimodeli esizikhethileyo zinenkqubo elungileyo kwintengiso eziqinisekisa ukuba ziya kuba nakho ukuhambisa nawuphina umdlalo okanye usetyenziso ngaphandle kwengxaki, nokuba bafuna umthwalo ongakanani wemizobo.
Thenga i-Samsung Galaxy S9 ngexabiso lehlazo
Ngenxa yoku banokucwangciswa kokuphakamisa ezinye iindlela ze-iPhone Xr njengeyona ndlela ifanelekileyo ukuba ufuna ezona fowuni zibalaseleyo ze-Android ezingaphantsi kwama-900 euros. Kwaye xa ubona ezi Amashishini eAmazon esikulungiselele yona, uyakuqonda ukuba ukuthenga i-iPhone Xr yimpazamo, ngakumbi xa unokufumana i-Samsung Galaxy S9 engaphantsi kwe-530 euro.
Ewe ufunda elo lungelo, umsebenzi omkhulu wosapho olusekwe eSeoul lwe-Galaxy S luyathengiswa eAmazon. Sithetha ngefowuni enescreen esenziwe yipaneli ye-AMOLED efikelela kwisisombululo se-QHD +, esona sixhobo sibalaseleyo kwintengiso kunye nokugqitywa kwesinyithi kunye neglasi ezenza i-Samsung Galaxy S9 yeyona ndlela ilungileyo eya kwi-iPhone Xr. Ingaba ulunde ntoni thenga i-Samsung Galaxy S9 ngexabiso elifanelekileyo?
Thenga i-Samsung Galaxy S9 ngee-euro ezingama-520 kuphela
Ngaba ufuna i-phablet njengenye indlela eya kwi-iPhone Xr? i-Galaxy Note 9 iya kuba ngumlingane wakho osenyongweni
Ukuba awukhathali nokuba ifowuni incinci kune-iPhone Xr, ifayile ye I-Samsung Galaxy Note 9 Olunye ukhetho oluya kuthathelwa ingqalelo. Sithetha ngefowuni ngesona sikrini sihle kwimarike, ngokugqibeleleyo kugqityiwe kunye nezixhobo zehardware eziphakamisa I-Samsung Galaxy Note 9 njengenketho yokuthatha ingqalelo.
Kukwathengiswa ngoku eAmazon nge isaphulelo sama-euro angama-200 Ukuhlala kwii-euro ezingama-849 kuphela, ezingama-70 ze-euro ezingabizi kakhulu kune-iPhone Xr. Ewe, ifowuni enescreen esingcono kunye nekhamera enamandla ngakumbi ixabisa ngaphantsi kwe-iPhone Xr ...
Thenga i-Samsung Galaxy Note 9
Eyona fowuni yekhamera kwintengiso ngexabiso elinomtsalane
Ngelishwa, inguqulelo yePro yeHuawei's Mate phablet yosapho ayikabikho, njengoko isabiza kakhulu kune-iPhone Xr, ke kuyakufuneka "siyilungiselele". Huawei Mate 20. Ewe, enye ifowuni edlula i-iPhone Xr kwiinkalo ezininzi, ngakumbi kwicandelo lokufota enkosi ngenkqubo yekhamera kathathu enika ukusebenza okuphezulu kakhulu kunokhuphiswano lwayo.
I-Huawei Mate 20 okwangoku ixabisa i-euro ezingama-799 kuphela, ixabiso liphantsi kakhulu kune-iPhone Xr. Kwaye kuye kwaziswa kamva!
Thenga iHuawei Mate 20
Ukugqiba ukudityaniswa kunye nezinye iindlela ezifanelekileyo kwi-iPhone Xr, asinakuphulukana nethuba lokuthetha ngeHuawei P20 Pro.Ifowuni enoyilo olufana kakhulu nolowo uchasene naye, kodwa ngenkqubo yekhamera kathathu eya kwenza into ebonakalayo Umahluko kwinkangeleko yefoto.
IHuawei P20 Pro, enye indlela eya kwi-iPhone Xr kunye necandelo elimangalisayo lokufota
Ukuba songeza kule ntsebenzo intle kwaye sinako ngoku thenga iHuawei P20 Pro Ngexabiso eliphantsi kakhulu, sinayo enye indlela enkulu eya kwi-iPhone Xr. Ngaba zikhona ezinye izisombululo ezigqitha kwi-iPhone Xr? Singabiza ezinye iiterminal ezininzi, ezinje ngeSony Xperia XZ2 yeNkulumbuso, kunye nescreen sayo se4K, kodwa umahluko wexabiso awubalulekanga kangako kangangokuba sikhethe ukubheja kwiifowuni ezine ezinikezela nokusebenza, banezinto ezithile ezingaphaya kwe-iPhone Xr nangaphezulu, zibiza ixabiso eliphantsi kakhulu.
Thenga iHuawei P20 Pro
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-iPhone Xr: ezi zezinye iindlela ezilungileyo onokuzifumana